Amantshontsho atya bodwa nini | Amakati eNoti
UMonica sanchez | | Ukutya
Xa ikati izalwa, ihamba ngethuku lokungcamla ukutya kwayo kokuqala: ubisi lukamama. Iya kuba kuphela kwento oyityayo de amazinyo aqale ukungena, into eza kwenzeka emva kweeveki ezine. Kungoko kuphela apho umama wakhe aya kuyeka khona ukuncancisa.
Ke kubalulekile ukuba uyazi Amantshontsho atya bodwa ngaliphi ixesha, kwaye kukuphi ukutya esinokubanika kona ukuba bakulungele xa ixesha lifikile.
1 Ngaba iikati zidla zodwa kangakanani?
2 Uyazi njani iminyaka yekati?
3 Itya ntoni ikati elisandul 'ukuzalwa?
3.1 Ndingamnika ntoni umntwana ikati?
4 Ungayilumla njani ikati?
5 Itya ntoni ikati enenyanga enye ubudala?
6 Uyifundisa njani ikati ukutya yodwa?
7 Ndicinga ukuba iikati zidla ukusuka kobuphi ubudala?
Ngaba iikati zidla zodwa kangakanani?
Iya kuxhomekeka kakhulu kugqatso, kodwa ngokubanzi phakathi kwenyanga enesiqingatha kunye neenyanga ezimbini Sele benomhlathi owomeleleyo ngokwaneleyo ukuba bangatya. Into eyenzekayo kukuba kuloo minyaka basebancinci kakhulu ukuba bangabondla ngokuxhomekeke kwinto, ke kuyacetyiswa ukuba ubanike ukutya okumanzi ukuze kubelula ukuba batye.
Kwimeko apho ukhetha ukubanika ukutya, kufuneka ichaze iikati, kuba iinkozo zincinci kakhulu. Ukongeza, kubalulekile ukuba ungazisi ukutya okuziinkozo, kuba zinokubangela i-aleji.
Uyazi njani iminyaka yekati?
Ukwenza eli nqaku libe luncedo kuwe, ndiza kukuxelela ukuba ubazi njani ubudala bekati eselula, kuba enye yeveki ayityi ngokufanayo nenye yenyanga.
Iintsuku ezingama-0-3 zobomi: Uvale amehlo, uvale iindlebe kunye nesiphunzi sentambo.
Iintsuku 5-8: iindlebe zivulekile. Inokuqala ukukhasa kodwa incinci.
Iiveki ezi-2-3: uqala ukuvula amehlo, aya kuba luhlaza okwesibhakabhaka (uya kugqiba ukuvula ngasekupheleni kweveki yesithathu) Kule minyaka kuphuma amazinyo abantwana, eyokuqala iba zizisisi.
Iiveki ezi-3-4: ii-canines ziyaphuma, kwaye sele ihamba ngesibindi, nangona igxadazela kancinci.
Iiveki ezi-4-6: Ii-premolars, ezingamazinyo eziphakathi kwee-canines kunye ne-molars, ziyaphuma. Umbala wokugqibela wamehlo uya kuqala ukubonisa. Kule minyaka isilwanyana siphila okomtshana onobubi: iyadlala, ibaleke, ilale, ngamanye amaxesha itye.
Iinyanga ezi-4 ukuya kwezi-6: yenza ubomi obuqhelekileyo. Unako ukuba neyokuqala inzondeleloKuphuma amazinyo asisigxina:
6 ii-incisors kumhlathi ongasentla kunye ne-6 kumhlathi ongaphantsi
I-2 ye-canine kumhlathi ongasentla kunye ne-2 kumhlathi osezantsi
I-premolars ezi-3 kumhlathi ongasentla kunye ne-2 kumhlathi osezantsi
Itya ntoni ikati elisandul 'ukuzalwa?
Njengoko besesitshilo, intshontsho lekati kamsinya nje akuba ezelwe uya kufuna ngokwendalo umama kanina ukuba ondle ubisi lwakhe. Oku kufanele ukuba kukutya kwakho kokuqala, njengoko kubaluleke kakhulu. Nguye kuphela onazo zonke izondlo ozifunayo ukuze ube nesiqalo esihle sokukhula kwaye, nokuba sempilweni.
Kwaye oko Ubisi lwebele luyicolostrum kwiintsuku ezimbini zokuqalaNgumthombo osisityebi kakhulu wee-immunoglobulins (izilwa-buhlungu ezikhuselayo kwintsholongwane, iibhaktiriya, njl.njl. ezibangela izifo) yecost colostrum). Ukuba injana ayinalo ithuba lokuselaNokuba kungenxa yokuba umama eswelekile, uyagula okanye akafuni kuyikhathalela- into enqabileyo, yindlela, uya kuba nexesha elinzima lokusinda.
Ndingamnika ntoni umntwana ikati?
Ikati yam uSasha isela ubisi lwayo, nge-3 kaSeptemba, 2016.
Kuqhelekile ukufumana ikati esitratweni, ngaphandle konina. Umtshana wam wayifumana ikati yam uSasha ngo-2016 ebaleni, kwaye mna ndafumana uBicho wam onothando ecaleni kweziko lezempilo. Wayeneentsuku ezimbalwa nje ubudala; enyanisweni, ebengekawavuli amehlo akhe; yena kwelinye icala wayesele enenyanga. Kodwa kwakhona, ukubakhupha kwakungeyondlwan 'iyanetha.
Kwakufuneka sizilawule kakhulu, sizame ukuba singabandi okanye shushu kakhulu, kwaye ngaphezulu kwako konke ukutya kakuhle, kungenjalo ngesele begula. Kungenxa yoko le nto xa udibana nekati yosana, Kubaluleke kakhulu ukuba umnike ubisi uyakufumana uyathengiswa kwiiklinikhi zonyango lwezilwanyana okanye kwiivenkile zezilwanyana zasekhaya, kwaye ulandele imiyalelo ebhaliweyo kuyo ileta zonke iiyure ezingama-3-4 (Ngaphandle kobusuku ukuba uphilile: ukuba ulambile uya kukwazisa, ungakhathazeki).
Ukuba akukho ndlela yakufumana ubisi olunokubuyiselwa, ungamnika umxube wobisi wekati olandelayo:
I-250ml ye-lactose-free ubisi olupheleleyo
I-150ml yokhrimu enzima
1 iqanda leqanda (ngaphandle komhlophe)
1 icephe lobusi
Qinisekisa ukuba kushushu, malunga ne-37ºC. Ukuba kuyabanda okanye kushushu, akazukuyifuna, kwaye loo nto ayithethi ukuba ngekhe kube yinto yendalo ukumnika ngoluhlobo.
Ungayilumla njani ikati?
Ikati kufuneka uqale ukutya ukutya okuqinileyo okuthambileyo malunga neveki yesithathu-yesine yokuzalwa. Kule minyaka amehlo akhe aya kuvuleka, anombala oluhlaza okwesibhakabhaka, kwaye uya kuhamba enokhuseleko ngakumbi nangakumbi nokuzithemba. Abanye bayakhuthazwa ukuba babaleke, ngenxa yoko abasayi kuphinda bafune ukuba kwisibhedlele / ebhokisini.
Ukuba ukunye nomama, uya kujongana nokumazisa ukuba akasamniki ubisi nanini na xa efuna, lixesha lokuba atye ezinye izinto. Kodwa ukuba akanathamsanqa, kuyakufuneka ube nguwe omnika ubisi kwaye ndicinga ngenye indlela. Ndiza kukuxelela ukuba ndiyenze njani:
Kwiveki yokuqala yokulunyulwa: iibhotile ezi-4 + kunye neeposi ezimbini zekati ngemini
Kwiveki yesibini: Iibhotile ezi-3 + kunye neenkonzo ezintathu zeepat
Kwiveki yesithathu: Iibhotile ezi-2 + kunye neenkonzo ezine zepat
Ukususela kwiveki yesine ukuya kuthi ga kwiinyanga ezimbini: ii-patings ze-6, ezinye zifakwe ebisi
Itya ntoni ikati enenyanga enye ubudala?
Ukuthathela ingqalelo ukuba, ngokubanzi, amantshontsho eenkukhu aqala ukubonisa umdla wokutya kwinyanga enye emva kokuzalwa (nangona kunokuba kunjalo ukuba kukho abathile abangafuni ukuyeka ukusela ubisi ukuya kuthi ga kwiinyanga ezimbini), kuyacetyiswa ukuba, emva kweentsuku ezingama-30, uya kubanika iipatés (ukutya okumanzi) kweekati. Ukuze nabo babe nophuhliso olulungileyo, ndincoma ukuba ukhethe umgangatho ophezulu onomxholo ophezulu wenyama (engekho ngaphantsi kwama-70%).
Ungamnika nokutya okufakwe kubisi olutshintshayo, kodwa kumava ndikucebisa ukuba umnike iinkonkxa, kuba kuya kuba lula kakhulu kuye ukuzitya.
Uyifundisa njani ikati ukutya yodwa?
Ikati ifunda ngokulinganisa umama kunye nabantakwabo. Ukuba akahlali nazo, ezinye iikati zinokuba ngutitshala wakhe, kodwa ukuba le kuphela komntwana onayo ekhaya, kunokwenzeka ukuba ekuqaleni Kuya kufuneka umncede afunde ukutya.
Ukuba uzifumana ukule meko, thatha ukutya okuncinci- phantse ungabinanto, njengentloko yematshisi- kwaye ukubeke emlonyeni wakho emva koko ukuvale kancinci kodwa ngokuqinileyo. Ngokwemvelo, uya kuginya kwaye emva koko uya kutya yedwa.
Ndicinga ukuba iikati zidla ukusuka kobuphi ubudala?
Kuxhomekeka ekubeni loluphi uhlobo lokondlaukuba ifumile, kwi-patés, ungatya ukusuka kwiveki yesithathu okanye yesine; Kwelinye icala, ukuba yomile, xa kufuneka uyihlafune, kuya kufuneka ulinde iinyanga ezimbini ngaphambi kokuba uyinike, kwaye kwangoko kuya kufuneka uyimanzise ngamanzi ukuyenzela lula.
Kubalulekile ukuyazi loo nto sukungxama ukwahlula umama kwiinkukhu. Uyakwazi xa abantwana bakhe beyeka ukusela ubisi-ngesiqhelo, kwiinyanga ezi-2, kodwa kungathatha ixesha elincinci, ngakumbi ukuba zizilwanyana ezinkulu ezinje Maine Coon okanye Ihlathi laseNorway-. Ukusuka kwiinyanga ezi-3-4, amantshontsho aya kukwazi ukutya ukutya okomileyo ngaphandle kwengxaki, kuba amazinyo azo aya kugqiba ukukhula ngokukhawuleza: kunyaka omnye ubudala.
Njengoko ixesha lihamba ngokukhawuleza, sikucebisa ukuba uhlale ulungele ikhamera yakho bamba loo mathuba ahlekisayo ukususela ebuntwaneni yethenda yomhlobo wakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iikati zikaNoti » Amakati » Ukutya » Amantshontsho atya bodwa eneminyaka emingaphi
Izimvo ezi-141, shiya ezakho
UAntonella Bazan sitsho
Molweni, ndinamantshontsho ekati amane asandula kugqiba inyanga enye kwaye enye ifuna ukutya ukutya konina, ingaba asilophawu lokuba bakulungele ukutya ukutya kwaye bashiye ubisi?
Phendula u-Antonella Bazan
Ewe ngokunjalo. Ngoku ungaqala ukumnika ukutya okufakwe emanzini, okanye iinkonkxa zeekati. Kodwa ukuya kwiinyanga ezimbini kunyanzelekile ukuba asele ubisi lukanina amaxesha ngamaxesha.
Leidy kwezinye iilwimi sitsho
Molweni, ndisandula ukwamkela intshontsho elingangenyanga, bamshiya elahliwe, akazi ukuba angatya njani na okanye unomdla wokwenza njalo, ndimnika ukutya okufakwe emanzini kunye nenyama yomhlaba kwaye akukho nto, kuye kwafuneka ndithenge ubisi olukhethekileyo yeekati kwaye umnike ibhotile, Into endiyaziyo Yenza ukuba kube nzima kum kuba ndisebenza imini yonke, ndingenza ntoni ukutya ndedwa ??? Ubonakala ephilile kwaye elumkile kakhulu, ingxaki kuphela kuziwa ekutyeni, okuxhomekeke kwi-100% kum.
Ngelo xesha ikatana yakho ifuna umntu oza kuyondla, ubuncinci ade abe neeveki ezi-2 ngaphezulu. Kungcono ubuze umntu omthandayo ukuba abone ukuba bangathatha indawo na. Ungazama ukumnika ukutya kwekati emanzi, okanye ukutya kwekati okomileyo okufakwe ebisini, kodwa usemncinci kakhulu ukuba angatya yedwa.
Molweni ndinekati eneenyanga ezi-2 ubudala kodwa akatyi yedwa. Ndabeka ukutya kwekati kufakwe emanzini, ubisi lwekati kwaye akanamdla nakweyiphi ... kufuneka ndinike ibhotile yam nokutya Sele ndidiniwe ngoba bendikule meko ukusukela ndinentsuku eziyi-10 ubudala, kwaye ngamanye amaxesha andinaxesha.
Kuyandinceda andazi ukuba mandenze ntoni ukuze ndimtye yedwa. Ndidibanise ukutya kwakhe neenkonkxa zeekati kwaye utya kancinci kodwa ayizizo zonke.
Ngamanye amaxesha iinkukhu zifuna ukusela ubisi lwekati ixesha elide. Uzamile ukumnika ityhuna? Ukuba kukutya okuthambileyo, akunakuchukumisa ukuba neengxaki zokukuhlafuna.
Ngayiphi na imeko, ukutyelela ugqirha wezilwanyana akonzakali, njengoko unokuba nomlomo okanye iintlungu esiswini.
Imibuliso kunye nenkuthazo enkulu.
m ilanga sitsho
UMigatita wazala ngomhla we-11 kwaye ndinee kitties ezi-2 ezintle ndiyathemba ukuba zifana naye iiveki ezi-3 waqala ukufuna ukutya isuphu kunye nomhluzi nangona engazange avumele umama wakhe ancancise umama wakhe wamkela i-yorsai yam
Ngelo xesha abanye baqala ukufuna ukuzama ezinye iintlobo zokutya, kodwa ukuya kuthi ga kwiinyanga ezi-2 okanye baya kuqhubeka nokusela ubisi amaxesha ngamaxesha.
Molo, intshontsho lam lekati lazala iikati ezintlanu kwiintsuku ezili-5 ezidlulileyo, zazisebhokisini kufutshane nendawo yekhitshi, kodwa ngoku ifuna ukuzihambisa kwindawo ephantsi kwebhedi, inokuba yintoni isizathu? Ngaba awusithandi isithuba okanye kungenxa yokuba badala?
Awungekhe usithande isithuba. Ikhitshi ligumbi apho abantu bachitha ixesha elininzi, kodwa akukho mntu uphantsi kwebhedi 🙂.
Molweni, kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo sidibene nekati emalunga nenyanga okanye inyanga enesiqingatha, bendiqala ukumnika ibhotile rhoqo emva kweeyure ezintathu kodwa wayithatha kakuhle iintsuku ezimbini okanye ezintathu zokuqala kwaye akafuni kwakhona, saqala ngepate kunye ne-kibble yeekati kwaye uyitya kakhulu ingxaki kukuba asazi ukuba mondle kangaphi, ukuba simnika kakhulu okanye kancinci
Kungcono ukushiya i-feeder ihlala igcwele, kuba ezi zilwanyana zitya amaxesha ambalwa ngemini.
Ngayiphi na imeko, ukuba awufuni okanye awunakuhlala uyishiya ifumaneka simahla, isixa esinconyelweyo ngokobudala bakho kunye nobunzima sibonisiwe kwingxowa yesondlo, kodwa ngaphezulu okanye ngaphantsi iya kuhambelana malunga ne-25 yeegram ngosuku (kufuneka yiba zii-servings ezi-5 rhoqo kwiiyure ezingama-24).
UFrancisco de la Fuete sitsho
Iinkonzo ezi-5 ze-25grs. yonke imihla, azigqithisi?
Phendula uFrancisco de la Fuete
Enkosi ngokubuza, kuba ngale ndlela ndibone ukuba ndibhale uluvo lwam ngokungeyonyani. Ndifuna ukuthi, malunga ne-25 gram ngosuku isasazeka ngaphezulu kwe-5 servings.
Molo, ndinekati endiyishiyile umama wayo njengosana olusandul 'ukuzalwa, sele eza kugqiba inyanga kwaye ndimtyise ngobisi oluvela komphunga, kodwa kuba engafuni kusela, ingaba kuya kuba kuhle ukuqala ukumnika incasa yokutya ?
Ewe, ngelo xesha unokuqala ukutya ukutya kwekati emanzi, okanye ukutya okufakwe ebisini okanye emanzini.
Molweni, ndineenkukhu ezi-5 zenyanga enye kwaye zitya zodwa kwaye zisela amanzi, azihlali zingashukumi kwaye ziphume ebhokisini yazo kwaye umama wazo akahoyi kangako, wayefuna ukwazi ukuba ndingakwazi na ukuzisa kubo. abanini. Enkosi
Amantshontsho ekati kufuneka abe kunye nomama kunye nabantakwabo ubuncinci iinyanga ezimbini. Nokuba sele betyile bodwa kwaye abemi ngxi, kufuneka bazi ukuba zithini na imida yentlalo, kubandakanya: ndingadlala njani kwaye nini nomntu, ukuba kungaluma kangakanani, xa kufuneka ndiyeke ukukhathaza abantu abadala, njl. .
Ngaphandle kwesi siseko, amathuba okuba uya kuthi ekugqibeleni udale iingxaki kusapho lwakho olutsha kakhulu.
ULucia Estraño sitsho
Molo, ndinamantshontsho ekati anenyanga enye ubudala kwaye andazi nokuba ndingakwazi na ukuqala ukuwatyisa ukutya okuqinileyo okufana ne-gatarina okanye ii-croquettes ... kubo okanye ukuba ndingabahlamba ngesipho esithile.
Phendula uLucia Estraño
Ewe, ngenyanga banokuqala ukutya okuqinileyo, kodwa kungcono ukuqala ngokutya okumanzi okanye ukufakwa emanzini.
Ngeentakumba, into yabo kukulinda bade babe neenyanga ezimbini ubudala, kodwa kunjalo, abayi kuba kunye nabo inyanga. Unokwenza oku kulandelayo: sika i-lemon kwizilayi kwaye uyibeke embizeni ngamanzi, ide ibile. Emva koko, uthele la manzi (ngaphandle kwezilayi) kwisitya, ulinde ukuba shushu kwaye uhlambe iikati.
Kubaluleke kakhulu ukuba uzomise kakuhle emva koko, ngakumbi ukuba ubusika, kuba kungenjalo banokubanda.
Molo kule nyanga izayo ndingathanda ukuthatha ikatana abandinike yona. Andazi nokuba mandiyamkele na kuba ndingaziswanga kwaye ndinoloyiko lokuba lo mncinci uzakuba neengxaki xa emsahlula kunina uyeke ukutya okanye kufuneka asele ubisi kwaye angabinaye nomama wakhe wokuncancisa. yena.
Ikati ingahlulwa nini kunina?
Ndicinga ukuba ndingakunika ntoni?
Iikati zingohlulwa kumama oneenyanga ezimbini. Ngelo xesha sele benokutya ukutya kwekati ngaphandle kwengxaki.
Ndibulisile ndinekati eneeveki ezi-2 ubudala, ndimtyise ntoni? Sele bekwiminyaka apho iimfuno zabo bebodwa?
Ngelo xesha lobudala kuya kufuneka uthathe ibhotile enobisi lweekati, kwaye ukusukela kwiveki yesi-3 okanye yesi-4 ungaqala ukuyinika ukutya kweekati ezifakwe ebisini-zeekati-.
Usafuna uncedo oluncinci ukuze uzikhulule, ewe. Emva kwesidlo ngasinye, kufuneka udlule i-gauze okanye ikotoni emanzi ngamanzi ashushu ukuze uchame kwaye uzikhuphe.
Enkosi kakhulu ngolwazi.
Ndiza kudlulisa ixesha elingakanani kuye?
Okomzuzu kuya kwanela. Ndiyabulisa kwaye ndiyabulela.
Molo, kwiveki ephelileyo ndifumene ikati eyadini yam, bendicinga ukuba ndingayichukumisi kuba ndicinge ukuba ithathwe ngunina. Kungekudala emva koko, ndabona umama, owayeyindawo. Ndamnika ukutya okumanzi ukuba abe novelwano kwaye abe nobuhlobo… watya. Ngexesha eladlulayo xa ndadibana nekatana ndedwa, yandikrwitsha. Andifuni ukubahlukanisa kwaye ndiyazi ukuba ikati sisilwanyana somntu. Ngaba ndingazenza ngathi intshontsho lalingolwam ngaphandle kokukrokrela iimfundiso zikanina ngabantu? Khange ndifune ukukuphazamisa kumninawa wakho onamandla… ndinokulindela ntoni?
Ungayifumana intembeko yomntwana wakho ngokumnika ukutya okumanzi, njengoko inuka ngakumbi kunokuba yomile kwaye imnandi kubo. Kancinci kancinci uza kubona ukuba izakusondela njani kuwe.
Inkalipho, uya kubona ukuba uya kuyiphumeza
Molo ngokuhlwa, enkosi ngeli phepha, ndisandula ukuthatha intshontsho lekati endilifumene lilahliwe esitalatweni ndedwa, ndimse kugqirha wezilwanyana wandixelela ukuba uneentsuku ezili-18 kuphela, ndimthengele ifomula yakhe kwaye ndacinga ukuba ngekhe aphile ngobusuku bokuqala, ngethamsanqa nangoku kusele iveki kunye nam, ke ndijike apha ndatya ukutya okuqinileyo, imibuliso!
Enkosi kuwe, kwaye ndiyavuyisana nelungu elitsha losapho
Kwiintsuku ezintathu ezidlulileyo indawo yokungcakaza yavela egadini yam. Simse kugqirha wezilwanyana wasixelela ukuba unentsuku ezingamashumi amabini ubudala, kodwa khange achaze ukuba mandimncede azikhulule. Ndingenza ntoni? Ngobusuku bokuqala wazikhathaza kodwa khange aphinde
Ngeentsuku ezingama-20 kufuneka utye zonke iiyure eziyi-3-4, ibhotile enobisi lweekati, okanye usilele ukuba kufuneka udibanise ikomityi yobisi olupheleleyo (ngokukhethekileyo ngaphandle kwe-lactose), isikhupha seqanda (hayi esimhlophe) kunye nepuni idessert yobisi. Emva kwesidlo ngasinye, kuya kufuneka umncede azikhulule ngokudlula ngegawuli efudumeleyo kwindawo yakhe yesini, ukusuka esiphelweni sesisu ukuya ezantsi emilenzeni.
Ngelo xesha unokuqala ukunika ukutya kwekati enkonkxiweyo, kodwa kuya kufuneka ukwaziswe kancinci kancinci. Kude kube yinyanga enesiqingatha, kufuneka aqhubeke nokuthatha ibhotile.
Mholo ngalentsasa! Ndineenkati ezi-4 zenyanga enye ubudala, umama usweleke ngelanga lam elincinci.Umbuzo wam ngowokuba ndingabanika ukutya, bathathe iibhotile ezimbini kwaye ezinye ezimbini azifuni kuthatha ...
Ndiyaxolisa kakhulu ngokusweleka kwekati yakho
Abancinci bakho inyanga enye banakho ukuqala ukutya ukutya okuqinileyo, njengokutya okumanzi kweekati okanye ukutya-kweekati-ezifakwe emanzini.
Kuyo nayiphi na imeko, ubuncinci kude kube ziiveki ezintandathu zeminyaka kuyacetyiswa ukuba nepleyiti enobisi -ikati- kuba zithanda ukusela amaxesha ngamaxesha. Ewe kunjalo, ukusuka kwiveki yesi-7 okanye yesi-8 kufuneka basele amanzi kuphela.
Mholweni!! Ndineenkukhu ezintathu ezinenyanga enye ubudala, intshontsho lam, umama wakhe usweleke kwaye iindawo zokungcakaza azifuni kusela ubisi okanye ukutya nantoni na, kodwa intombi yam encinci ibanike isonka esithambileyo asityileyo kunye neendawo zokungcakaza. utye isonka kwangoko? Okanye ngaba kubuhlungu ukuyitya? Kuba injalo loo nto okomzuzwana
Phendula u Yeimy
Ewe, akukubi kangako, kodwa emva kwenyanga kufuneka baqale ukutya ukutya kwekati ethambileyo, njengoko ndicinga ukuba kumanzi. Ewe, ifakwe kakhulu lubisi okanye amanzi afudumeleyo, kuba ukuba akunjalo, abayi kuyitya.
Nangona kunjalo, okwangoku bayayiqhela kwaye ukuze bangalambi, kungcono ukuba baqhubeke nokutya isonka esithambileyo. Kodwa hamba wazise ukutya okumanzi okumanzi kancinci kancinci. Unokuzama ukutya okomileyo kwekati, nayo ifakiwe.
Mholo! Ndineenkukhu ezintathu malunga nenyanga ubudala, umama wazo usweleke kwaye ndibanike ubisi olunamasi ngoba andifumenanga bisi lweenkukhu, ndizithambise ndigxile kwelo bisi kwaye ezimbini zitya kakuhle, kodwa enye ayikhali kwaye ilila kakhulu, Ngaphandle kwabo ndicinga ukuba benza kakubi kuba banesisu esihambisayo ngoku. Into endiyenzayo? Ndiziva ngathi andibakhathaleli.
Ubisi lweenkomo okanye lweegusha ludla ngokuba mbi kwiikati. Kodwa xa ungayifumani ekhethekileyo yeekati, akukho enye indlela ngaphandle kokuzenza ngokwethu ... ekhaya Qaphela le recipe:
150ml ubisi olupheleleyo
50ml yeyogathi yendalo
Iqanda eliluhlaza-ngaphandle kwawo nawuphi na umhlophe
Ithisipuni yekhrim enzima
Hlanganisa yonke into kakuhle, ushushu kancinci de ubushushu, kwaye usebenze.
Ngapha koko, kuloo minyaka yobudala ungaqala ukubanika ukutya okumanzi kweekati, ezinqunqiweyo. Okanye ukutya kwekati emanzi kufakwe emanzini.
Molo, ndinekati endindinike yona inyanga okanye ngaphezulu, bendifuna ukwazi ukuba ingaba ingatya ukutya okuqinileyo (ityhuna, inkukhu, inyama egayiweyo), okanye isencinci kakhulu, kwaye ukuba kunokwenzeka andikwazi yinike, kukutya kuni okundicebisayo. Enkosi
Ewe, ngenyanga unokuqala ukutya ukutya okuqinileyo kwekati, njengeetoti.
Kwaye kwiiveki ezintandathu ukuya kwezisixhenxe kuya kubakho ukumnika inyama egayiweyo.
Hector david sitsho
Ikati yam ineentsuku ezili-15 ubudala .. Kodwa umama wakhe akanalo olo bisi bandicebisayo
Phendula kuHector David
Kungcono ukusela ubisi olulungiselelwe iikati, ezithengiswa kwiiklinikhi zonyango lwezilwanyana kunye nakwiivenkile zezilwanyana.
Ukuba awukwazi ukuyifumana nangayiphi na indlela, unokumlungiselela oku:
-150 ml yobisi olupheleleyo (i-lactose-free, ngokukhethekileyo)
-50 ml amanzi
-50 ml iyogathi yendalo
-Iqanda leqanda leqanda (ngaphandle komhlophe)
-Itispuni yekhrim enzima
Hlanganisa yonke into kakuhle, kwaye ushushu kancinci, kude kube shushu (malunga ne-37ºC).
Ukubulisa, kunye nenkuthazo 🙂.
USilvia Petrone sitsho
Molweni ndinekati nosana lwakhe, amantshontsho anenyanga ezi-1 ubudala kwaye ayaphuma ayodlala.bendifuna ukwazi ukuba kunyanzelekile na ukubapha ukutya ngaphandle kokutya abakunikwa ngunina kwaye kufuneka banike Amanzi lawo. Enkosi
Phendula uSilvia Petrone
Ewe, kwinyanga enye ubudala banokutya ukutya kwekati. Kukwacetyiswa kakhulu ukuba uqale ukubanika amanzi.
Molweni, ninjani? Ndihlangule ikatana izolo ndizokumthatha, usayoyika yonke into ukusukela ephantse wagilwa, andazi ukuba ndimnike ntoni ukondla oko engazange abenekati. , Ungacebisa ntoni malunga nenyanga enesiqingatha, ndiyathemba ukuba impendulo yakho, enkosi.
Ngelo xesha sele angatya ukutya okuqinileyo (okuthambileyo), okufana neenkonkxa zekati okanye ukutya kwekatana okufakwe emanzini.
Imibuliso, kunye novuyiso 🙂.
Molweni, ndinamantshontsho ekati amabini anenyanga enye endawondla ngobisi lweekati oko azalwayo, ndiqale ukubanika ndicinga nesiLatin, enye itya ukutya kakuhle isele amanzi kodwa enye ayikho ukutya nantoni na, ufuna ibhotile kuphela ndizamile ukuqhuba ubisi kwi-feeder kodwa hayi, andikuniki ibhotile ukubona ukuba abalambileyo bayayitya kodwa akukho nto. Ayothusi into yokuba utya kancinci kwaye akatyi kakuhle
Uzamile ukumnika ukutya kwekati emanzi? Ukuba kunjalo, zama ukumnika umhluzi wenkukhu (ongenamathambo), okanye umazise (ngenkani kodwa ngaphandle kokumenzakalisa) ukutya okumanzi okuncinci. Vula umlomo wakhe, ufake kwaye uvale. Yigcine ivaliwe ide iginye.
Yile nto bendinokuyenza ngekati yam, kwaye ngoku utya yonke into abayifaka kuye. Uthanda yonke into: s
Kwaye ukuba uyabona ukuba akukho ndlela, mse kugqirha wezilwanyana ukuze abone ukuba akukho kuphazamiseka kumthintelayo ekutyeni.
Mholweni . Ndinekati elineeveki ezi-3 ubudala kwaye lineekati ezi-4 kodwa lineentsuku ezimbini okanye ngaphezulu kunale xa lizondla libuhlungu kwaye liyakhalaza ngentlungu yalo, ndingenza ntoni? Enkosi
Ukuba iikati zineeveki ezi-3 ubudala, zinokuqala ukutya ukutya okuqinileyo okuthambileyo okufana neenkonkxa zokutya kwekati emanzi.
Ungabanika encinci - kakhulu, encinci kakhulu - ngomnwe wakho, ukubeka ukutya emlonyeni wabo, ngaphandle kokucinezela. Uvula nje umlomo wayo uze uyondle.
Kwimeko apho bengayifuni, kwaye sithathela ingqalelo ukuba umama sele eqala ukuziva iintlungu xa ebancancisa, kufuneka sinyanzelise.
Olunye ukhetho kukuthenga ubisi lweekati-ezithengisiweyo kwiiklinikhi zonyango lwezilwanyana- kwaye uzame ukubasela kusela.
Kwiinyanga ezimbini, amantshontsho ekati angatya odwa, ukutya okanye iinkonkxa zokutya kwekati emanzi. Ukuba awuyifuni, ungayifaka emanzini okanye kumhluzi wenkukhu (ongenamathambo).
Enkosi kuwe, Luis. 🙂
I-GUADALUPE NGOKUPHELELEYO sitsho
Kwiinyanga ezimbini ezidlulileyo ndikhathalele amantshontsho amahlanu, umama wabo emva kokuba bezelwe ndiyabashiya kodwa abanobuchule, bayoyika yonke into kwaye ngalo lonke ixesha ndisiza ndibashiya ukutya kwabo babaleka naphi na, umbuzo wam ngowokuba bangakwazi utya amaqebengwana? '
Phendula kwi- GUADALUPE TORRELLY
Ngeenyanga ezimbini ungamnika ukutya kweekati ezifakwe emanzini. Ngale ndlela baya kukuqhela ukusela ukutya okuxabisekileyo.
Kwimeko apho bengayifuni, banike ukutya kwekati emanzi, kwaye ubeke ipleyiti yamanzi ecaleni kwabo ukuze basele nanini na befuna.
Andithandabuzi, ndinamantshontsho ekati amabini aneeveki ezintathu ubudala (ngokuka mama), kwaye ngokwento endiyifundileyo apha sele beqala ukutya izinto ezimanzi, kodwa ngokuka mama, kude kube kuphume amazinyo ( ucinga ukuba abanazo). Ndingenza ntoni?
Umama wekati akabahoyanga kwiintsuku ezi-4 okanye ezi-5 ezidlulileyo. Kwaye ngoku sikunika ubisi endaweni yeekati. Sinikezela ngesirinji. Ngaba kufuneka nditshintshe ibhotile?
Ndimele ndiyeke nini ukumnceda aye kwindlu yangasese?
Ukuba ikati kamama ibibakhathalele kude kube ngoku kwaye khange kubekho ngxaki, into yokuba sele engazihoyi ezincinci kungenxa yokuba uyazi ukuba badala ngokwaneleyo ukuba bangazondla. Ewe ndicinga ukuba ukutya okumanzi kweekati okanye ukutya okomileyo kweekati ezifakwe emanzini.
Kwiiveki ezintathu akukho mfuneko yokuba ubanike ibhotile.
Enkosi kakhulu Monica
UJulissa Fernandez Cueva sitsho
Molweni, ndinekati enenyanga ezi-2 ubudala, ndinexhala lokuba itya kakhulu kwaye intle, ndiyamphakela kancinci kwaye ke uyaqhubeka nokugabha, ndixeleleni ukuba yinto eqhelekileyo? Andazi ukuba ndenze ntoni, ndinexhala kuba ndiyayithanda i-fluff yam
Phendula uJulissa Fernández Cueva
Unokuba ne-parasites yamathumbu. Ingcebiso yam kukuba umse kugqirha wezilwanyana ayokufumana unyango.
Molweni, ndinekati eyathi kwiintsuku ezingama-40 ezidlulileyo yayinenjana, kwafuneka ndiyinike izinto zokuthintela ukukhulelwa kuba yayiqale ukushushubeza, de utyando lusancancisa iinjana, inyani yokuba isela iipilisi iyakwenza nto kubo.? ??
Ngokomgaqo ndingathi hayi, kodwa kungcono ukudibana nogqirha wezilwanyana.
Mholweni!!!! Baza kundinika intshontsho lenyanga enesiqingatha kwaye bendizibuza ukuba kunyanzelekile na ukuba ndimnike ubisi olukhethekileyo ebhotileni, naxa sele esitya ndicinga ukuba… ..?
Ngenyanga enesiqingatha sele ungatya ukutya okuqinileyo (ukutya kwekati emanzi, okanye ukutya kwekati eyomileyo egalelwe emanzini).
Molo, samkela ikatana, basixelela ukuba unenyanga ezi-2 ubudala, kodwa unobunzima beigram ezingama-250, kuyinto eqhelekileyo kwaye kuyinto eqhelekileyo ukuba akadlali, ulala ngalo lonke ixesha, ushukuma eyokutya ukutya kwakhe kwaye ukuya kwibhokisi yenkunkuma ukuzikhulula. Ndiyayixabisa impendulo yakho. UCarina
Ubunzima bulungile, kwaye kuyinto eqhelekileyo kuye ukuchitha ixesha elininzi elele, kodwa ukuba akadlali phantse nantoni, kungenxa yokuba kukho into eyenzekileyo kuye. Mhlawumbi une-parasites yamathumbu. Kuya kufuneka umse kugqirha wezilwanyana ukuze amvavanye kwaye amnike olona nyango lufanelekileyo.
Molweni, jonga ndineenkati ezi-5 esele zineenyanga ... zinamazinyo ndaye ndagqiba kwelokuba ndizithengele ukutya kwekati ... ezinye ziyatya ... kwaye ikati ibanika ubisi ngokufanayo ... kulungile ukuba basele ubisi kwaye batye enye okanye enye ingqolowa ... hayi batya kakhulu, batya ukutya okuziinkozo kuphela ... ayizukubenzakalisa ngokufanelekileyo… inyengane endibathengayo incinci kakhulu ... . Enkosi
Ukuba umama usabanika ubisi, kulungile. Kodwa ewe, ngenyanga kuya kufuneka baqale ukutya ukutya okuqinileyo 🙂.
URossana Parada sitsho
Molo, ndinekati eneenyanga ezili-16 ubudala, ine-hypoplasia, ngaphandle kwale iphila ubomi obuqhelekileyo, iyakumenzakalisa ukusela ubisi, kufuneka amaxesha ngamaxesha, ukubingelela
Phendula Rossana Parada
Ubisi lweenkomo lungazigulisa iikati. Nangona kunjalo, ukuba i-lactose-isimahla okanye ikhethekileyo kubo, unokuyithatha amaxesha ngamaxesha.
Mholo! Kungekapheli neveki ndamkele ikati, kuba ikati yomhlobo wam yayineekati kwaye yayingakwazi ukuhlala nazo zonke, ndambamba xa eqala ukutya ndicinga ukuba kumanzi, kodwa kwizinto endizifundileyo, andenzi njalo. Yazi ukuba senze kakuhle ngokwahlukanisa kungekudala kunina (malunga nenyanga kunye neveki edlulileyo), unamathela phantse imini yonke, andazi ukuba ikhona into engalunganga kuye okanye ulusana nje, ndingathanda ungathanda ukundinika iingcebiso, enkosi!
Amantshontsho ekati kufuneka abe kunye nomama iinyanga ezimbini ubuncinci. Ngenyanga kunye neveki banokutya iitoti zokutya kwekati emanzi; ukutya okomileyo akukakwazi ukuhlafunwa kakuhle.
Ukuba uyakhala kufanele ukuba kukulamba, okanye kuba ebanda. Kule minyaka abakakwazi ukulawula ubushushu bomzimba wabo kakuhle.
NDINENYANGA NESIHLULELA SEKITI KODWA AKAYITYI NANTSI INTO IPEPAS, UFUNA UKUTYA UKUTYA KOMNTU NJENGESINKWA.
Kwinyanga enesiqingatha kungcono ukutya ukutya kwekati emanzi, ubuncinci iiveki ezimbini.
Kwiinyanga ezimbini, unganika ukutya kwekati, okumanzi ngamanzi amancinci okanye okuxutywe nokutya okumanzi.
UArmando Florez sitsho
Ngaba kunokwenzeka ukuba ikati ifudumale xa incancisa?
Intshontsho lekati linekati elinenyanga enye ubudala.
Phendula kuArmando Florez
Hayi, ayinakwenzeka. Kule minyaka akakafiki ekukhuleni ngokwesondo, into aza kuyenza kwiinyanga ezi-5-6.
Molweni, ndinekati emalunga neenyanga ezintathu, sele enamazinyo apheleleyo, kodwa waqaphela ukuba akazityi yedwa kwaye umama wakhe usandula ukubhubha, ndingenza ntoni ukumtyisa?
Ngelo xesha lobudala kubalulekile ukuba sele sele ezitya yedwa. Ezi nkonxiweyo zekati, zinqunqwe kakuhle. Thatha enye uze uyibeke emlonyeni wakho; uze uvale ngokuqinileyo. Iya kuginya ngethuku layo.
Oku kukodwa kufanelekile ukuba kukhuthaze umdla wakhe wokutya, kodwa ukuba akunjalo, kwenze amaxesha amaninzi.
Molo, ndinengxaki enkulu kwaye andazi ukuba ndithini. Usapho lwam kunye nam sachola ikati esitalatweni, wayekhulelwe kwaye wayenekati endlwini yethu malunga nenyanga enesiqingatha eyadlulayo, phezolo ikati ihambile kwaye ayikabuyi. Andazi ukuba ndenzeni neekati, zintandathu kwaye akukho mntu apha unexesha lokuzondla rhoqo emva kweeyure ezimbini okanye ezintathu, kuyanceda, andazi ukuba ndizondla ngantoni okanye ntoni.
Ngelo xesha kufuneka batye ukutya kwekati emanzi (iinkonkxa), okanye ukutya kwekati okufakwe emanzini.
Ukuba awukwazi ukuyikhathalela, ungasoloko ubeka 'iikati zanikwa' imiqondiso. Mhlawumbi umntu unomdla.
Ubusuku obuhle, ndifuna ukwazi ukuba kukuphi ukutya kwimveliso endinokukunika ikati yam eneenyanga ezimbini ubudala kunye nendlela endinokumfundisa ngayo ukuba azikhulule esantini, enkosi
Kwiinyanga ezimbini, eyona nto intle kukutya ukutya okumanzi ubuncinci iinyanga ezintathu. Kuyabiza ngaphezu kokomisa, kodwa ekubeni amazinyo akho esakhula kunokuba nzima ukuhlafuna.
Olunye ukhetho kukuntywila ukutya okomileyo ngamanzi.
Nokuba uyinika ntoni na, kuya kufuneka ichaze ikati.
Ngokubhekisele kwiimpawu, ndicebisa abo bangazisebenzisi iinkozo, ezinje ngeApplaws, Acana, Orijen, Taste of the wild, True Instinct Meat High, njl.
Malunga nombuzo wakho wokugqibela, in Oku kubhaliwe Sichaza indlela yokufundisa.
Molweni, ndinekati enenyanga kunye neentsuku ezintlanu ubudala umama wakhe wasweleka ebeleka ngoko ke ndamthatha ndamncinci kakhulu. Amantshontsho am esela ubisi olukhethekileyo lwamantshontsho angenakuncanciswa ngunina kodwa kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo nditshintshele kukutya okuqinileyo kosana, ndizamile ukumanzisa njenge-puree kwaye ndiyazise kancinci emlonyeni wakhe, kodwa uyayala kwaye ndiyaphela ndimtyisa ibhotile. Ndingenza ntoni ukumnceda afunde ukutya yedwa?
Ndincoma umonde kwaye ndiqhubeke ndinyanzelisa. Umzekelo, ungamnika ibhotile kusasa, kodwa emva kwemini uzame ukubeka inani elincinci kakhulu lokutya kwekati emlonyeni wakhe. Gcina kuvaliwe ngokucinezela ngobunono ade aginye, into ekufuneka eyenzile ngokwemvelo.
Nje ukuba kwenziwe, into eqhelekileyo kukuba kamva ufuna ukutya yedwa, kodwa ukuba uyabona ukuba akafuni, mnike enye into encinci.
Kancinci kancinci kufuneka atye yedwa, kodwa ukuba iintsuku ziyahamba kwaye akenzi, mthathe uye kugqirha wezilwanyana ukuze abone ukuba unazo na iingxaki.
Molo, ndinekati encinci enenyanga ezintathu ubudala yasePersian chinchilla kwaye ayazi ukuba itya njani, iyakhotha ukutya kwaye xa izama ukukubamba, iyawa emlonyeni wayo, andazi ukuba ndithini kwakhona ... Ndixhalabile ukuba akalulo olo sana usondla ubisi kuphela.
Ndidinga uncedo, enkosi!
Into yokuqala iya kuba kukujonga ukuba unazo na iingxaki emlonyeni wakho, ezinje ngomzekelo wentlungu. Ke into yokuqala endinokuyincoma iya kuba kukumsa kugqirha wezilwanyana ukuze ahlolwe.
Ukuba yonke into ilungile, zama ukuxuba ukutya kwekati emanzi (iinkonkxa) nobisi. Yinqunqe kakuhle ukuze ungayihlafuna. Ukuba akasayi kutya, thatha ukutya okuncinci okugalelwe ubisi kwaye kukufake emlonyeni. Emva koko vala ngokuqinileyo kodwa ungonzakalisi.
Ngokwemvelo, kufuneka aginye, kwaye ngokwenza njalo uya kuqonda ukuba uyayithanda kwaye aqale ukutya yedwa.
Ukuba akunjalo, zama kwakhona ukubeka ukutya okuncinci emlonyeni wakhe. Kwaye ukuba akunjalo, kuye kuthi qatha kum ukuba ungamnika ukutya ngesirinji (ngaphandle kwenaliti).
U-Loren azcarate sitsho
Molweni, adopt a kitten baby, ndamsa kugqirha wezilwanyana samthengela ubisi olukhethekileyo kodwa ulala imini yonke xa simkhupha endlini ukhala kakhulu, unentsuku ezingamashumi amathathu ezelwe.
Phendula uLoren azcarate
Ngelo xesha kuyinto eqhelekileyo ukuba balale iiyure ezingama-18 ukuya kwezi-20. Ukuba ulala ngakumbi, kusenokwenzeka ukuba unengxaki yempilo efuna ingqalelo yezilwanyana. Ngokuqinisekileyo ayisiyonto, kodwa xa kufikwa kumantshontsho amancinci, musa ukuvuya.
UJohan andres sitsho
Ndiyakucela, intshontsho lam lingxamisekile, umama usweleke xa ndinazo ndaye ndathandaza omnye unentsuku eziyi-15 ubudala kwaye akakhange azidle iintsuku ezi-5 kodwa utya kamnandi kwaye ulele ngokwesiqhelo, ndingenza ntoni? ukuba kubuhlungu nangona ndingamboni makakhalaze
Phendula uJohan andres
Ngaphakathi kwimizuzu eli-10 emva kokuba utyile, kuya kufuneka uvuselele indawo ye-anus kunye nomqhaphu ofakwe emanzini afudumeleyo, kuba kule minyaka akayazi indlela yokuzikhulula.
Ukumnceda, ukumthambisa (ujikeleze ngokujikeleza iiwotshi) kwisisu sakhe imizuzu emi-5 emva kokutya.
Kwaye ukuba ayenzi njalo, xuba ukutya kwakho neoyile encinci (amathontsi ambalwa)
Mholo! Ikati yam yaba sisoka kwaye yazisa intombi yakhe ekhaya yazala iikati ezi-3. Baneentsuku ezingama-20. Izolo ndivule i-fishmonger kwaye ndazisa i-steaks ezimbalwa ukunika abazali abatsha ukongeza ukutya okomileyo. Ndingazinika nini iintlanzi (ndiza kuzisika kakuhle) kwiintsana?
Ukuchongwa kakuhle ungaqala ukubanika ngoku, kodwa kungcono ukulinda de babe neentsuku ezili-10 ngaphezulu
Molweni ndinengxaki. Ikati yam ibineekati ezine, zineentsuku ezili-17 ubudala kwaye ikati ayisafuni ukuzincancisa kwaye ndixhalabile kuba bayalila kakhulu, ngamanye amaxesha babamba ikati ngokunyanzelwa emva koko batya iikati. Okanye ngaba ikati ayivelisi bisi?
Ngeentsuku ezili-17 ubudala baqala ukutya ukutya okuqinileyo, okuthambileyo, njengokutya kwekati emanzi. Vula Oku kubhaliwe ichaza indlela yokuqhela ukutya ukutya okuqinileyo.
Ngapha koko, ukuba banokuba nobisi ezinye iintsuku ezintathu, bade babe neminyaka engama-20, kunokuba yinto elungileyo kubo.
Ubusuku obuhle, ndinekati, waye wenziwe inzalo ngoJulayi 21, 2017 kodwa unebhola encinci kwinxalenye yokusebenza, isiswini, iya kuba yinto yesiqhelo.
Ukuba ikati ikhokelela kubomi obuqhelekileyo, mhlawumbi ubhekisa kwilonda eliphilisiweyo. Ixesha elingaphezulu uyakuqaphela okuncinci.
UBrian Becerra sitsho
Molo, oku akunanto yakwenza noku kodwa ndiyathemba ukuba uyacebisa ukuba ndihlale ndedwa nomama kwaye kusasa ndiye esikolweni kwaye umama usebenza into eyenzekayo kukuba iikati zam (ezintlanu) sele zineeveki ezi-4 mdala kwaye uMama ubonakala egula kuba engafuni kutya kwaye mva nje andifuni kubancancisa kwaye namantshontsho abaleka ebhokisini yawo kwaye aqala ukuntywila kakhulu kwaye andazi nokuba ngeeveki ezi-4 iinkukhu zingatya. Uyabona ukuba abafuni ukushiya umama wabo, andazi ukuba mandithini, ndiyoyika ukuba bazogula okanye kwenzeke into ethile kubo kwaye ndikhathazekile nangempilo yekati yam.
Phendula uBrian Becerra
Amantshontsho ekati kwiveki ezi-4 angatya ukutya kwekati emanzi, okanye ukutya okomileyo okumanziweyo ngamanzi.
Malunga nomama, ubonwa ngcono ngugqirha wezilwanyana. Uya kuba nakho ukukuxelela into engalunganga ngayo kunye nendlela yokuyinyanga.
Ngeentsuku ezingama-20 ungaqala ukubanika ukutya okumanzi kweekati, zityunjwe kakuhle, kodwa kule meko eyona nto ibhetele onokuyenza kukuyisa kugqirha wezilwanyana ukunqanda ukuba kuphinde kusweleke.
Ikati yam inenyanga neentsuku ezine izelwe.Ayikho ngaphandle komama kunye nezimvo kodwa ayizukundlala, ndenzeni? ??
Kuya kufuneka uyidlulise ibhola yomqhaphu efakwe emanzini ashushu ngaphezulu kwendawo yakhe yangasese emva kwemizuzu elishumi utyile.
Ukuba akunjalo, yinike iviniga encinci (isiqingatha secephe elincinci). Le yindlela anokuthi akwazi ukuzikhulula ngayo.
Ikati yam yayineekati ezine kwaye yonke into yayihamba kakuhle kodwa ukuza kuthi ga ngoku iinwele zakhe ziyalahleka kuyinto eqhelekileyo okanye uyagula.
Hayi, ayiqhelekanga. Ndicebisa ukumsa kugqirha wezilwanyana ukuze ahlolwe.
Molo, ityhubhu yam yekati ezi-4 zamantshontsho, namhlanje zineentsuku ezili-17 ubudala, zilungile, ziyasebenza, kodwa ndinexhala lokuba yonke imihla bavuka ngamehlo abo ethe nca nge-lagañas kwaye kakuhle ...
Unokuzihlambulula nge-gauze emanzi nge-chamomile infusion, kathathu ngemini.
Ukuba abaphucuki kwiveki, ndicebisa ukuba ubathathe uye kugqirha wezilwanyana.
UMonica restrepo sitsho
Mholo! Ndineenkukhu ezimbini malunga nenyanga enesiqingatha kwaye abafuni kutya ukutya okuqinileyo, ibhotile kuphela, bayakhala ngathi bayaphambana kodwa abazami nokufuna ukutya okuqinileyo ... bayandicebisa! Enkosi!!!
Phendula uMonica Restrepo
Ndincoma ukuthenga ukutya kwekati emanzi. Uthatha intwana encinci ngomnwe, kwaye uyifaka emlonyeni wakhe (ngokuqinileyo kodwa ngaphandle kokumenzakalisa). Emva kokuzama kabini okanye kathathu, kufuneka, atyeke yedwa, atye yedwa. Ukuba akunjalo, unokuyidibanisa nobisi olungena-lactose oluncinci.
Molweni, ndinqwenela nindincede, ikati yam ayisafuni ukuncancisa amantshontsho kwaye iseneentsuku ezili-13 ubudala, kufuneka ndimnyanzele kwaye alile ngenxa yendlala, ndingenza ntoni?
Ngokuqinisekileyo, iikati kufuneka zisele ubisi ubuncinci iveki enye.
Ukuba umama akafuni ukubanika, kuya kufuneka ubanike ibhotile rhoqo emva kweeyure ezi-3 kwaye ukhuthaze indawo yokuzala kunye ne-gauze efakwe emanzini ashushu ukuzikhulula.
Olona bisi lubalaseleyo lolunye abathengisayo abalungiselelwe kwiiklinikhi zonyango lwezilwanyana kunye nakwiivenkile zezilwanyana zasekhaya, kodwa ukuba awukwazi ukulifumana, ungenza lo mxube:
50ml iyogurt engenanto (engenaswekile)
I-yolk eluhlaza okweqanda (ngaphandle komhlophe)
UFrancisca lillo sitsho
Molo, ndinenyanga encinci kunye ne-1 iveki yentshontsho kwaye sele itya ukutya okuqinileyo ngaphandle kwengxaki kodwa ndinexhala lokuba amazinyo akhe aya kwenzakala, kuba awakakhuli ngokupheleleyo. Ndingenza ntoni?
Phendula uFrancisca Lillo
Ungamnika ukutya kwekati emanzi, okanye udibanise i-kibble ngamanzi amancinci. Kodwa ungakhathazeki ngamazinyo akhe: ukuba ubona ukuba uhlafuna kakuhle, ngaphandle kokukhalaza, akukho ngxaki.
UElizabeth cordoba sitsho
Molo, ikati yam ibineekati ezi-4, kwaye yonke imihla ikati yommelwane ukuba iintsuku zokuba nazo ndiyishiye, apho sibeka khona iinjana ecaleni kwezam kwaye ndiyabona ukuba ikati yam idiniwe kwaye inomsindo ngexesha lokuncancisa. Zili-8 ... kwaye zishiyeke ezinye zazo, sele zineentsuku ezingama-20.
Phendula u-Elizabeth cordoba
Ngeentsuku ezingama-20 ungaqala ukubanika ukutya kwekati emanzi (iinkonkxa), nokuba uwedwa okanye ufakwe emanzini afudumeleyo.
Ukuba abatyi, thatha kancinci ngomnwe wakho kwaye uzibeke emlonyeni wakho. Baya kuyiginya ngethuku. Ukusuka apho baya kutya bodwa, kodwa kunokuba yimfuneko ukubuyisela ukutya emlonyeni wabo.
Kwenze ngokuqinileyo kodwa ngobumnene, ngaphandle kokubenzakalisa.
Molo, intshontsho lam lekati elineeveki ezintlanu, sele ndimnika ukutya kwekati, usela ngobisi lweekati ukuze ndimnike ebusuku kuphela. Kodwa ndiyabona ukuba ngalo mhla ndingathanda ukuba endaweni yebhibi. Inokunikwa kube kanye ngemini ndicinga ukuba ayikabikho? Kwingxowa yasebukhosini ye-baby canin ibeka i-5gr rhoqo kwiiyure ezingama-30
Ngeeveki ezi-5 sele ungatya ukutya okuqinileyo okuthambileyo, amaxesha ama-2-3 ngemini. Lixube nobisi lekati de ibe neenyanga ezimbini ubudala.
Molo, ilunga lam linenyanga kwaye lithatha ubisi kwibhotile. Ngaba lixesha lokuba uyeke ukukunika?
Emva kwenyanga sele sele ungatya ukutya kwekati emanzi (iinkonkxa), kodwa uxube nobisi, kuya kubalula kuwe ukukuqhela.
Molo ndinekati yenyanga e-1 kunye neeveki ezimbini kwaye ukuthandabuza kwam kukuba emini iyenza ipee yayo kunye nomsizi wayo ukuba ube kakuhle ebhokisini enenkunkuma kodwa ebusuku iyandenza kwaye andazi ukuba kutheni ... Kwaye enye yayinika ubisi ngaphandle kwe-lactose kwaye ndayikhupha ndaqonda ukuba yayisenziwa amaxesha amaninzi ngemini kwaye ithambe kakhulu ... Ubisi luyimfuneko
Kwiiveki ezintandathu hayi, akukho bisi alunyanzelekanga. Ewe kunjalo, kuya kufuneka uqale usele amanzi. Unokuntywila ukutya kwabo emanzini ashushu ukuze ingangcamli kakhulu.
UViviana Veliz sitsho
Molweni, kwiiveki ezimbini ezidlulileyo sifumene amanye amantshontsho kwisitulo esidala kwipatio yendlu kamama, asazi ukuba bazalwa nini okanye ngubani umnikazi wabo, umama ubanike ubisi kodwa kubonakala ukuba uyekile ukuza kwiintsuku ezidlulileyo kwaye namhlanje saqaphela lonto ngoba bayakhala qha kunzima nokushukuma, utata ubashiyele ubisi ekomityini kodwa omnye wawela wasweleka, andazi ukuba mandithini kuba kubonakala ngathi bazokufa.
Phendula uViviana Veliz
Amantshontsho eekati anjalo kufuneka abe kwindawo efanelekileyo kwaye eshushu, kuba akazukuqala ukulawula ubushushu bomzimba wabo ade abe neenyanga ezimbini ubudala.
Ukongeza, kufuneka basele ubisi lwe-lactose-free kwibhotile qho kwiiyure ezintathu, kwaye umntu kufuneka ebakhuthaze ukuba bazikhulule. Unolwazi ngakumbi apha.
Ndifumene iikati ezintathu ezimalunga neeveki ezintathu. Kwaye amehlo abo athe nca ndawonye kwaye usulelo lubi kakhulu kwaye andazi ukuba ndibondle ngantoni.
Unokucoca amehlo abo nge-gauze emanzi ekufakweni kwe-chamomile, kathathu ngemini.
Ngeeveki ezintathu bangatya ukutya kwekati emanzi (iinkonkxa) ezixutywe nobisi oluncinci lweekati ezithengiswe kwiiklinikhi zonyango lwezilwanyana, okanye ngamanzi ashushu, qho kwiiyure ezi-3-4.
Molo, ndinekati eneentsuku ezingama-40 ubudala. Ndimnika ubisi oluchetyiweyo ngamanzi kuphela. Kwaye uyachama kodwa akenzi poop. Ndinayo kangangeentsuku ezintathu kwaye andazi ukuba kuyinto eqhelekileyo na ukungenisa ubisi kuphela, okanye ukuba akunjalo. Enkosi
Ngelo xesha sele angatya ukutya kwekati emanzi (iinkonkxa), ezixutywe nobisi oluncinci olushukunyiswa ngamanzi, okanye ngamanzi odwa.
Kwimeko nayiphi na into, ukuba akayikukhupha, vuselela indawo yesini kunye ne-gauze edibeneyo emanzini afudumele emva kwemizuzu eyi-10 emva kokutya. Kuya kufuneka ubhukule okungenani kanye ngemini.
Ukuba ayenzi njalo, ndincoma ukuyisa kugqirha wezilwanyana.
UMaria Patricia Pena sitsho
Nceda undincede! Ndithathe ikatana, malunga neenyanga ezimbini ubudala, kwiveki ephelileyo.
Ngeli xesha ebefuna ukusela ubisi kuphela. Kule veki, utyhile izihlandlo ezi-5 kuphela (ndimamkele ngolwesiThathu, ngo-Novemba 1 ndaza ndazithuma ngoLwesihlanu, ngo-Novemba 3, ngoMgqibelo, ngo-Novemba 4, ngoMvulo, ngo-Novemba 6 (amaxesha ama-2) nangoLwesibini, ngo-Novemba 7 (1 ndizamile ukondla ityhuna yakhe, i-kitty emanzi i-wiskas, inyama eluhlaza, i-kitty ricocat, kodwa akafuni kungcamla nayiphi na, engaselanga manzi.
Ndamsa kugqirha wezilwanyana ngoMvulo, eye-6 kaNovemba, bamthatha iqondo lobushushu, bandixelela ukuba yonke into ilungile kwaye ubonakala ngathi ugcwele, kodwa akakhange aqhinwe, nangona kunjalo ucebise ngokudibanisa ubisi lwakhe neoyile yomnquma, ndenze njalo, Kodwa yayikwangala mini kuphela awazithuma ngayo kwangoko nakanye ngosuku olulandelayo (Lwesibini).
Udlala kakhulu, akabonakali egula, kodwa ndinoloyiko lokuba uyakugula kuba akazikhuphi okanye atye ukutya okuqinileyo.
Phendula uMaria Patricia Peña
Molo Maria Patricia.
Ngeenyanga ezimbini ewe, kufuneka nditye ukutya kwekati 🙁
Kuyabiza, kodwa ndincoma ukumnika iRoyal Canin Baby Cat. I-kibble incinci kakhulu kwaye, igutyungelwe lubisi, amantshontsho athanda ukuyithanda kakhulu. Ukuba awukwazi ukuyifumana okanye awukwazi ukuyifumana (eneneni, ixabiso liphezulu kakhulu), jonga ii-croquettes ezinje, ezinobisi.
Olunye ukhetho kukuntywila ukutya kwakhe kubisi omnika lona.
Ngamanye amaxesha kuye kufuneke "ukubanyanzela" ukuba batye. Thatha iqhekeza lokutya - kufuneka libelincinci kakhulu, kwaye libeke emlonyeni wakho. Emva koko vala ngobunono kodwa ngokuqinileyo. Iya kuginya ngethuku. Kwaye emva koko kunokwenzeka ukuba sele izitya yodwa, kodwa inokuba yenziwe ngamanye amaxesha ambalwa.
Mholo. Namhlanje iiveki ezine ezidlulileyo ndihlangule amantshontsho ekati amabini amalunga neeveki ezimbini ubudala (ngosuku olulandelayo bavule amehlo) Ukusukela phezolo khange bafune ukusela ibhotile okanye batye i-concentrate efakwe elubisini, kodwa banomdla wokutya okomileyo. Abathandi ukusela amanzi, ndingenza ntoni? Enkosi
Ngenyanga yobomi kufuneka sele besitya ukutya okuqinileyo. Ukuba babonisa umdla kolu hlobo lokutya, luphawu oluhle kakhulu olo.
Bayeke batye, kodwa bayikhuphe ngobisi oluncinci okanye amanzi, nokuba incinci. Okanye, beka umkhombe ukuze bafunde ukusela amanzi ngokwabo.
Molo, ndinekatana enesiqingatha seminyaka (nge-2 yedisemba) kwaye ayifuni kutya kwanto okwangoku, sele ndizamile ukumnika i-paté okanye ii-cookies ezimanzi kwaye akukho nto .. Ndinexhala kuba ikati yam (umama wayo) hayi ixesha elide yintoni ukuncancisa kwaye ukunciphisa umzimba Enye into, kuyinto eqhelekileyo ukuba ndiqale ukuzikhupha namhlanje? (Nov 25) Ucebisa ukuba ndenze ntoni?
Zama ukondla ukutya kwakhe ikati emanzi efakwe ebisini okanye emanzini afudumeleyo. Okanye, jonga ukutya kwekati kwivenkile yezilwanyana efakwe kubisi, njengeRoyal Canin Baby Cat.
Mholo! Samkele ezinye iikati kwiveki ephelileyo. Banenyanga ezi-2 kunye neveki enye, kodwa bafuna ukutya ubisi olukhethekileyo lweekati, sizamile ukubanika ukutya okhethekileyo kweekati kunye neepatés kodwa abayihoya, ekuphela kwento eqinileyo abayityayo eYork Ham, sizama fihla ezinye ipellets zokutya kwiYork Ham, ngamanye amaxesha bazityile, ngamanye amaxesha bayikhafule, kodwa abayikhuphi ingqalelo yabo, ndiza kuzama ukufaka iikrokhethi kubisi olukhethekileyo njengoko ndibonile kwezinye izimvo. Kodwa ukuba ayisebenzi, andazi ukuba ndithini kwakhona! Ndicebisa ukuba ndenze ntoni? Sinqwenela ukuba batye bodwa ngoku, kuba asinakukwazi ukuchitha usuku lonke nabo kuba siyasebenza. Konke okugqibelele.
Ukuba ndiyakuqonda. Enye yamantshontsho endinawo egadini nayo iye yadlula kwizinto ezifanayo neekati zakho.
Kodwa isonjululwe ngokukhawuleza ngokumnika ukutya kwekati equkethe ubisi.
Andikuthandi ukunika olu phawu, kodwa le yindlela olunokubanceda ngayo ukuba bayiqhele: I-Royal Canin First Age. Kuyabiza ukuba yintoni (inee-cereal kunye nee-cereal azicoleli kakhulu iikati, kunye nexabiso eliphantsi), kodwa zilungile. Njengokuqala ukutya okuqinileyo kunokuba kufanelekile.
UAntonio Gonzalez sitsho
Molweni, umbuzo, ndinamantshontsho ekati amabini kwaye anentsuku ezingama-2 ubudala kwaye andazi ukuba ndizondla ngantoni kwaye zingaphi iintsuku endinokuzibamba ngazo.
Phendula kuAntonio González
Unokubanika ukutya kwekati emanzi exutywe nobisi lekati olufudumeleyo okanye amanzi.
Molweni ndinekatsana elineentsuku ezingama-27 ubudala, umama wakhe wamshiya xa wayeneentsuku ezi-3 ubudala, ndingathanda ukwazi ukuba ndingamnika ukutya okuqinileyo kwaye ndide ndikongeze nini ukondla kwakhe ngobisi, kuba ngamanye amaxesha uyala ibhotile okanye uyilume enkosi
Ngelo xesha sele ungamnika ukutya okuqinileyo (okuthambileyo). Thoba ubisi kangangenyanga enesiqingatha ngaphezulu nangaphantsi, emva koko ubeke umntu oselayo ngamanzi ukuze aqhelane nalo.
Molweni, ndinekati enenyanga enye ubudala ngomhla we-16/9/2018 unenyanga ezi-2 ubudala kodwa ngoku utya yedwa, akukho nto yenzekayo ukuba utya yedwa ndinika injana yakhe ukutya kwekati kwaye oku kutya kuzocolwa kuba kuthambile kwaye usela nobisi olungumgubo akukho nto yenzekayo ukuba utya oko kutya?
Ewe, ngelo xesha sele benokutya bodwa.
Molweni, kwintsuku ezi-2 ezidlulileyo ndathatha ikati enenyanga ezi-2 ubudala, ndamthengela ukutya okumanzi nokomileyo ukuchama, kodwa akafuni kutya, uyanuka kunye ne-voila, nokuba ulambile akatyi, Ndithenge ubisi olungumgubo olunyibilikayo ngamanzi ashushu, ndifuna ukugcina ukuba olu bisi lubambele ubisi lwebele kwaye lutyiwa lodwa kwisitya, aludingi bhotile okanye nantoni na ... umbuzo wam ngulo. Ndingamfundisa njani ukutya ukutya okuqinileyo nokuyeka ubisi?
Okokuqala, ukuvuyisana nolo longezo lutsha kusapho. Ngokuqinisekileyo uya kuyonwabela kakhulu 🙂
Malunga nombuzo wakho, kwiinyanga ezi-2 ungaqala ukutya ukutya kwekati emanzi. Kufuneka usike ngokwaneleyo ukuze kube lula kuye ukuhlafuna.
Ukuba awuyikhathaleli okanye uyayala, yinyange ngobisi oluselayo. Ukuba uyatya, gqibelela. Njengoko iiveki zihamba, kuya kufuneka ungeze ubisi oluncinci.
Kwimeko apho angayityi khona, kwaye kuba, ewe, kubaluleke kakhulu ukuba atye, kuya kufuneka umnyanzele ngobumnene kodwa ngokuqinileyo. Thatha ukutya okumanzi kancinci kunye nencam yomnwe, ukufake emlonyeni. Kuba unokwenza konke okusemandleni akhe ukuyikhupha, kuya kufuneka ugcine umlomo wakhe uvaliwe imizuzwana embalwa, ade aginye.
Emva koko, usenokuba utya yedwa, kancinci kancinci.